प्रेममा असफल अविवाहित ८ नेपाली नायिका | Lifemandu
| बिहीबार, २० पुष, २०७४
एकथरिले फष्ट लभ असफल हुन्छ भन्ने मत राख्छन् । तर, यसलाई सत्य यही नै हो भनेर मान्न सकिने अवस्था पनि देखिदैंन् ।
किनभने, कयौं मानिसको पहिलो प्रेम सुखद् रहेको पाइन्छ । हलिउड, बलिउडमाजस्तै नेपाली फिल्म जगतमा पनि कयौं हिरोइनहरु पहिलो प्रेम र त्यसपछिका प्रेममा पनि असफल भएका छन् ।
१. निता ढुंगाना
२. निशा अधिकारी
तर, उनीहरुको सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन् । जसका कारण गत वर्ष निशा अमेरिका उड्दाताका उनीहरुको ब्रेकअपको समाचार बाहिर आएको हो । भलैं, यसलाई निशा र शरद दुवैले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन् । स्रोतकाअनुसार उनीहरुबीचको सम्बन्ध त्यतिबेलादेखि नै ब्रेकअपको संघारमा पुगेको थियो ।
पछिल्ला उनीहरुका क्रियाकलाप पनि यहीतर्फ संकेत गर्छन् । भलै, केही हप्ताअघि मात्र सिनेमा हेर्न सँगै गएपछि यो जोडीको प्याचअपको चर्चा पनि चलेको छ । तर, यस विषयमा उनीहरु दुवैले मुख खोलेका छैनन् । त्यसैले निशा र शरदको प्रेम सम्बन्ध पनि टुटिसकेको पुगेको बताइन्छ । उसो त शरदभन्दा पहिले पनि निशा प्रेमको रहेको बताइदैं आएको छ ।
३. मलिना जोशी
तर, उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध गत वर्षको अन्त्यतिर टुटेको बताइन्छ । अरु नायिका तथा मोडलहरुको जस्तो चर्चामा नआएको यो जोडीको ब्रेकअपका विषयमा गत वैशाखमा एक कार्यक्रममा राखिएको जिज्ञाशामा मलिनाले आफूहरुबीच प्रेम नै नरहेको बताएकी थिइन । अनुपविक्रमले भने आफ्ना निकटकाहरुसँग मलिनासँग ब्रेकअप भएको बताउँदैं आएका थिए ।
नायिका सुष्मा कार्की पनि प्रेममा असफल हुने अर्की नायिका हुन् । बर्दिया स्थायी घर भएकी यी नायिका एक समय निरन शाहीसँग गहिरो प्रेममा थिइन । सार्वजनिक रुपमा पनि निरन र सुष्माको जोडीको निकै चर्चा हुने गरेको थियो ।
कतिसम्म भने निरनको प्रेममा पागल प्रेमी बनेकी सुष्माले आफ्नो शरीरमा निरनको नामको ट्याटु समेत बनाएकी थिइन ।
तर, तीन वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहेको यो जोडी आपसमा विवाद बढेपछि २०७१ साउनमा एकअर्काबाट अलगिएको हो । सुष्माका प्रेमी निरन उनलाई सार्वजनिक स्थानमै कुटपीट समेत गर्थे । सुटिङ होस वा रेष्टुरेष्टमा उनीहरुबीच कुटपीट भएका खबरहरु खुबै आए ।
निरन्तर आफूलाई सार्वजनिक स्थानमै कुटपीट गर्न थालेपछि सुष्माले निरनबाट ब्रेकअप लिएकी हुन् । त्यसअघि उनको नाम निर्देशक सुदर्शन थापासँग जोडिएर चर्चामा नआएको होइन ।
७. जेनिशा केसी
एक अनलाइनसँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो ब्रेकअप भएको कुरा स्वीकार गर्दै विगतका पललाई नकोट्याउन आग्रह गरिन् ।
‘भो विगतका पलहरुलाई नकोट्याउ,’ उनले भनिन् । जेनिशाका खुल्न नसकेका प्रेमीसँग विवाहको तयारी पनि अगाडि बढेको बताइन्छ । तर, २ वर्ष लामो उनीहरुबीचको प्रेम केही महिनाअघि मात्र ब्रेकअप भएको हो ।
८. ऋचा शर्मा
नायिका ऋचा शर्मा पनि पहिलो प्रेम सम्बन्धमा असफल हुने नायिका हुन् । उनको नायक तथा निर्माता विनय श्रेष्ठसँग अफेयर्स रहेको थियो । कुनै समय गहिरो प्रेममा रहेको यो जोडीको २०६९ मा ब्रेकअप भएको हो । भिसा गर्ल निर्माणका क्रममा उनीहरूबीच विवाद चुलिएको बताइन्छ ।
त्यही विवाद नै यो जोडीको ब्रेकअपको कारण मानिएको छ । त्यसपछि ऋचा सिंगल छिन् भने विनयले एनी थापासँग यही वर्ष लगनगाँठो कसिसकेका छन् ।
पेरुका कप्तान डोपिङ परीक्षणमा असफल, प्ले–अफमा खेल्न नपाउने
कात्तिक १८ । पेरुको राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान पाउलो गेरेरो डोपिङ परीक्षणमा असफल भएका छन् । नशालु पदार्थको परीक्षणमा असफल भएपछि गेरेरो विश्वकप छनौटका लागि हुने प्ले–अफमा खेल्न नपाउने भएका छ
यसकारण विग्रिन्छ अविवाहित युवतीको पाठेघर, लक्षणसहित
काठमाडौँ । धेरैजसो भ्रम छ कि अविवाहित युवतीको पाठेघरमा समस्या आउने तथा बिग्रने खतरा रहँदैन । अविवाहितको पाठेघरमा समस्या निम्तिने धेरै कारण् छन् ।
कस्तो देखिएला साम्राज्ञी र प्रदिप खड्काको जोडी ? यो चलचित्रमा देखिदैँछन् दुवै एकसाथ
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छोटो समयमै निकै चर्चित दुई नायक र नायिका हुन् प्रदिप र साम्राज्ञी । नायक अनमोल केसीसँग ‘ड्रिम्स’ चलचित्रबाट डेब्यू गरेकी नायिका साम्राज्ञी निकै रुचाइ